Nwanyị nwunye Armie Hammer na ụmụ ya kwuru nke ọma na ọdụ ụgbọ elu
Ọ gaghị adị mfe ịbụ Elizabeth Chambers, na-anwa ịzụlite ụmụaka abụọ na Armie Hammer, bụbu di kpakpando nke ihe nkiri nkiri ya na-eche ihu nyocha ndị uwe ojii na mbibi ọrụ mgbe ọtụtụ ụmụ nwanyị nwụsịrị. Ebubo ebubo nke ndina n'ike na ụdị anụ ahụ na nke mmụọ ọzọ. mmegbu.
Chambers, onye TV, onye siri nri na onye ọchụnta ego, kpebiri inye Hammer nkwado ya mgbe ọ rịọrọ ya maka enyemaka na mbubreyo Mee, ọ bụ ezie na o kwuru na Machị na ọ "wụrụ m akpata oyi ma wute ya" site na ebubo ndị e boro ya, Ihe efu efu kọrọ na Tuesday. Hammer, 34, gwara Chambers, 38, na ọ dị njikere maka ọgwụgwọ, ọbụlagodi na nke ahụ pụtara na ọ ga-ahapụ njem ya na Cayman Islands na Caribbean wee gbaga United States.
Hollywood, CA - APRIL 13: Ndị na-eme ihe nkiri Elizabeth Chambers na Armie Hammer na-aga A24 "Fire Fire" nke mbụ na ArcLight Hollywood na Eprel 13, 2017 na Hollywood, California., (Foto nke Jesse Grant / Getty Images)
N'agbanyeghị nke ahụ, Hammer kwere nkwa ịlele n'ụlọ ọrụ dị na Orlando, Florida, wee nweta enyemaka na ọgwụ, mmanya na mmekpa ahụ metụtara mmekọahụ, isi mmalite gwara Vanity Fair. O kwewo nkwa ịnọ ebe ahụ ọ bụrụhaala na ọ ga-ewe iji nwetaghachi ahụ ike ya.
Iji gosi nkwado ha, Chambers na ụmụ ha abụọ, Harper, 6, na Ford, 4, so Hammer gaa ọdụ ụgbọ elu Grand Cayman iji sị ya nọrọ nke ọma, A kọọrọla ya na netwọk mmekọrịta.
Otu onye dere na soshal midia "Elizabeth na umuaka a tufuru ya (ped) ma jee ebe ekwere." Ọtụtụ ịmakụ anyị, o yikwara ka ọ bụ nke mmetụta uche. "
Hammer rutere na ụlọ ọgwụ ọgwụ na May 31, isi mmalite abụọ gwara Vanity Fair.
Otu n'ime ndị enyi ahụ kwuru, sị: "Onye ọ bụla na - ele Armie anya na ọ na - eche na ọ nwere ụdị ohere ndụ - na nke ahụ ga - apụta na ọ nweghị nsogbu n'oge ọ bụ nwata na ihe niile zuru oke," ndị ikwu nke onye omee ahụ na Vanity Fair. “Ma nke ahụ abụchaghị otú ọ dị. Ebe ọ bụ na ị si n’ụlọ akwụkwọ ebe akụnụba hiri nne apụtaghị na ndụ enweghị nsogbu.
Ezigbo enyi Hammer gbakwunyere, “Ọ bụ ihe ngosi doro anya na ọ na-eweghachi ịchịkwa ndụ ya ma mara na nke ahụ bụ nzọ ụkwụ maka ọdịmma ya dum.
Enyi na-ezo aka na agụmakwụkwọ Hammer metụtara eziokwu ahụ bụ na onye omee ahụ tolitere na ezinụlọ bara ọgaranya na nke a ma ama na ọ bụ nwa nwa nke onye na-eme mmanụ na onye ọrụ ebere Armand Hammer. Kpakpando ahụ tolitere na Cayman Islands na Los Angeles tupu ya ahapụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị Baptist na San Fernando Valley iji chụsoo ọrụ.
Ọrụ Hammer, na-arịgo site na akpọrọ "Kpọọ M Site n'Aha Gị" na 2017, dabara na mgbidi na mbido Jenụwarị mgbe ọtụtụ ụmụ nwanyị bịarutere iji bo ya ebubo mmejọ nke mmụọ, aghụghọ na ime ihe ike.
Asịrị ahụ jikwa ịnụ ọkụ n'ike ka akụkọ na-ekwupụta na onye omee ahụ zipụrụ ụmụ nwanyị banyere echiche efu nke mmekọahụ metụtara mmeko nwoke na anụ oriri. Asịrị ahụ manyere Hammer ịhapụ ọrụ abụọ dị elu: ihe ọchị ọchị ọchị nke Jennifer Lopez, bụ onye gụchara vidio na Dominican Republic, na usoro Paramount + nke na-asọpụta banyere ịme "Nna Chukwu." Agencylọ ọrụ ya, WME, hapụkwara ya.
Ebubo a were ọnọdụ dị njọ karịa na Machị, mgbe otu nwanyị, nke kpọrọ onwe ya Effie, nwere ọgbakọ mgbasa ozi Zoom n'akụkụ Gloria Allred, onye ọka iwu ama ama, bo onye omee ahụ ebubo na ọ nwere "ya". N'ike n'ike n'ike. Effie kwuru na mwakpo ahụ eboro ebubo mere na 2017 wee dị ihe karịrị awa anọ.
Onye ọka iwu Hammer, Andrew Brettler, kwupụtara nkwupụta siri ike, na-agọnahụ ebubo "ụjọ" Effie, na-ekwu na mmekọ nwoke na nwanyị ahụ nwere nkwekọrịta. Ka o sina dị, ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii na Los Angeles ekwenyela na ọ mepee nyocha. Ihe efu efu kọrọ na Tuesday na nyocha ahụ yiri ka ọ na-aga n'ihu, mana ndị uwe ojii jụrụ ikwu okwu.
Tutu ogbako ogbako Effie, Chambers gara n’ihu idozi ihe ojoo a. Hammer na Chambers kwupụtara nkewa ha na July, tupu esemokwu ahụ, na mgbe ezinụlọ nọrọ oge ọnụ na Cayman Islands, na iche iche n'oge ọrịa COVID-19.
Kemgbe ọtụtụ izu, m na-agbalị imeri ihe niile mere. O juru m anya, obi gbawara m, obi gbawara m, ”Chambers dere na Instagram na Machị “N’agbanyeghi iru uju, a na m ege nti ma na ga na aga n’ihu na-ege onwe m nti ma na akuziri onwe m ihe okwu ndia. Amabeghị m ihe m na-amaghị. Anọ m na onye ọ bụla merụrụ ahụ ma ọ bụ metọọ ma na-arịọ onye ọ bụla nọ na mgbu a ka ọ chọọ enyemaka ha chọrọ iji gwọọ.
Nkwupụta Effie banyere mmeko nwoke na 2017 na ebubo nke Vanity Fair kwuru na March na-egosi na Hammer ekwesịghị ntụkwasị obi nye Chambers. Nkwenye ekwenyeghi na nkwenye ya bụ ihe kpatara alụkwaghịm ahụ, ka Vanity Fair kwuru, onye kwukwara na akụkọ ọgba aghara nke ezinụlọ Hammer.
Otu enyi nke enyi Hammer gwara Vanity Fair na ọ kwupụtara nwunye ya na ọ ghọgburu ya ikike ya mgbe amụrụ nwa ha nwoke na 2017, mana ọ bụ ihe pụrụ iche. Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, enyi ahụ kwuru na Chambers chọtara ihe akaebe na di ya na-enwe mmekọrịta nwoke na nwanyị, ọ bụkwa ya kpatara ịgba alụkwaghịm ahụ.
"Ndị Hammers ahụ anọwo na ọgwụgwọ ezinụlọ dị oke ọnụ, mana maka Elizabeth enweghị nkọwa - na ọkachasị mkpebi ya ịgbapụ ezinụlọ n'oge ọrịa zuru ụwa ọnụ - bụ ahịhịa ikpeazụ," enyi ahụ gwara Vanity Fair. “Mgbe Armie rutere na United States, o hiere ụzọ zigara ya onye ọzọ na nwunye ya. Elizabeth gbara akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm obere oge ka nke ahụ gasịrị.
Otu enyi gwara Entertainment Tonight na ebubo ahụ eboro Hammer emeela ka ụwa Chambers tụgharịa.
Enyi ya kwuru, “Ọ na-arịa ọrịa site na mkpa dị iche iche nke ụmụ nwanyị. “Ihe mbụ dị ya mkpa, dị ka mgbe niile, bụ ụmụ ha na ịgbalị ichebe ha site na akụkọ a ma hụ na ha nwere nchekwa. Sourcezọ ọzọ gwara Entertainment Tonight na Chambers "na-eme ike ya niile iji hụ na ọdịmma nke ezinụlọ ya."
Maka Chambers, nke ahụ pụtara ịmụrụ nwa n'àgwàetiti Grand Cayman, ebe o zipụrụ foto ya na nwa ya nwanyị na nwa ya nwoke, na-agụ akụkọ oge ụra, na-eme ekeresimesi, na-anụ ụtọ ịchụ nta nke Ista.
Edemede a pụtara izizi (n’asụsụ bekee) na https://www.mercurynews.com/2021/06/09/armie-hammers-estranged-wife-and-kids-said-good-bye-at-airport-before -his -trip-na-rehab /
dArmieditụmụMeeọdụ ụgbọIHENwanyị ahụnwere
TELES RELAY 52667 posts 1 comments